ပရိသတ်များ ကွင်းအတွင်း ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် အဂူရို တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း အတွက် အက်ဖ်အေ စုံစမ?? - Yangon Media Group
ပရိသတ်များ ကွင်းအတွင်း ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် အဂူရို တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း အတွက် အက်ဖ်အေ စုံစမ??
ဝီဂန်နှင့်မန်စီးတီးတို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသော အက်ဖ်အေဖလားပဉ္စမအဆင့် ပွဲစဉ်အပြီးတွင် ဝီဂန်ပရိသတ်များကွင်း အတွင်းဝင်ရောက်ကာ မန်စီးတီးတိုက် စစ်မှူးအဂူရိုအား ရန်ပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းဖြစ်ရပ်အပေါ် အက်ဖ်အေက စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါပွဲတွင် မန်စီးတီးအသင်းသည် ကွင်းလယ်လူ ဖေဘီယန်ဒဲဖ် အထုတ်ခံခဲ့ရပြီး ဝီဂန်ကို ၁-ဝ ဖြင့် အရေးနိမ့်ကာ ပြိုင်ပွဲမှထွက်ခဲ့ရသည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် ဝီဂန်အသင်း၏အောင်ပွဲကြောင့် ပရိသတ်များ ကွင်းအတွင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြ ပြီး ပရိသတ်တစ်ဦးက ကွင်းအတွင်းရှိ နေသည့်အဂူရိုအား ရန်ပြုရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့် ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်အပေါ် ဝီဂန်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်ရှက်ပ်ကိုယ်တိုင်က ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ၎င်းက ”မြင်လို့မကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆိုတာစိတ်ခံစားမှုလွယ်လို့ ပရိသတ်တွေ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပွဲအပြီးဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တာကို ကျွန်တော် မလိုလားပါဘူး။ ဒီပွဲရလဒ်က ကျွန်တော် တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုဆိုပေမယ့် အဆင့်တစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံကို မနှစ်သက်ပါဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အတူ ဝီဂန်နည်းပြပေါလ်ကွတ်ကလည်း ”ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ မမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်”ဟုဆိုသည်။ CCTV မှတ်တမ်းများအရ မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာနှင့် ဝီဂန်နည်းပြပေါလ်ကွတ်တို့သည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အက်ဖ်အေဖလားပြိုင်ပွဲတွင် ဝီဂန်ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာက ”ပထမဆုံးပြောလိုတာက ဝီဂန်အသင်းရဲ့ အောင်ပွဲအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ပွဲလုံးမှာမှ ဂိုးပေါက်တည့် အောင် တစ်ကြိမ်သာကန်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ဂိုးရသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းက အမှားတွေလုပ်ခဲ့လို့ ရှုံးခဲ့ရတာပါ။ ဒီရလဒ်ကို ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံ၊ ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောင်တရစရာ မရှိပါဘူး”ဟုပြောခဲ့သည်။
ဒရော့ဘာ၏သား အီဆတ်ကို ဂူအင်ဂမ့်အသင်း ခေါ်ယူစာချုပ်
မုံရွာ-ရွှေဘို ကားလမ်းတွင် ကျောက်သယ် ၁ဝ ဘီးယာဉ်နှင့် လောင်စာဆီတင် ယာဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် တို